Nhema mureza gandanga kurwisa London, Manchester, Paris, Barcelona uye Rotterdam pa 23 uye 24 Gumiguru? (UPDATE)): Martin Vrijland
Nhema mireza yekurwisa London, Manchester, Paris, Barcelona uye Rotterdam pa 23 uye 24 Gumiguru? (UPDATE))
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 22 October 2019	• 37 Comments
Nhasi ndakapihwa vhidhiyo umo Ole Dammegard anofanotaura mureza wenhema (Chirungu: nhema mureza) kurwiswa kwehugandanga muLondon, Manchester, Paris, Barcelona uye Rotterdam ye 23 uye 24 Gumiguru (UPDATE pazasi kwechinyorwa. Ini ndakarondedzera Ole Dammegard, Danish imwe nzira yekuridza mimhanzi, seyakagadziriswa pikisheni yekupikisa mune zvinyorwa zvekare. Izvi zvinoreva kuti angangoburitsa chokwadi kuti akunde zvikwereti uye ashandire seti yekuchengetedza simba rekutonga. Dzakadzora pawns dzimwe nguva dzinogona kuratidza zvinhu. Ehe ndinogona kuve ndakanganisa, asi fungidziro yangu ndeyekuti Dammegard yakadai pawn inodzora.
Akazvidzivirira munguva yakapfuura aimbove murume webandori kubva kune imwe nhau yainzi Zen Gardner. Zvakazoitika kuti uyu Zen Gardner (mushure mekunge awana makore mazhinji ekukurumbira mune mamwe midhiya midhiya) anogona kuve nechekuita neVana va Mwari. In ichi chinyorwa en ichi chinyorwa Ini ndakatsanangura nzira dzekunze dzinotarisana nevarume dzinogara dzichiwana rutsigiro, ndobva ndanyudza chikepe. Iyo inoerekana yaitika kuva nhengo yechinamato chinokudza pedophilia uye imwe yacho inozviuraya inogara munhepfenyuro yeredhiyo (kusazove mupenyu zvakare gare gare). Dzidza izvo zvinyorwa kuti uone kuti mutambo weiyo inopikiswa unoridzwa sei.
Dammegard inotsigira ruzivo rwayo pamusoro pekurwiswa kwehugandanga ((maererano neshoko rayo) munzira yekutevera kwerimwe ruzivo runoyerera kwemakore. Ini handigoni kubatsira asi kuwana fungidziro yekuti ari kupihwa ruzivo. Nezvangu izvi, izvi zvinoreva kuti tatova neyako safe net mbele kuvhurwa, izvo mushure mekurwiswa kupi nekupi vanotsvaga chokwadi vanokwanisa kutora zvese kamwechete. Mushure mezvose, ndiye gamba rakambofungidzira zvese izvi.
Nezvangu nezvangu, hatifanire kushamisika kuti idzo (mureza wenhema) kurwiswa kuchauya chaizvo. Ipapo isu tichave tichawana 'yechokwadi nharaunda' online uye kuti chokwadi chenzvimbo chichava zvakakwana muhomwe yemasevhisi, nekuti ivo vatangisa yavo yakavimbika kumberi (Ole Dammegard) kutanga. Iyi ndiyo nzira iyo mutambo weanopokana wakaridzwa kwemakumi emakore, uye ndozvichaita panguva ino.
Ole aizoisa ruzivo rwake padatha kubva kukambani inonzi Crisis Solutions (dambudziko-solutions.com). Dumbu rangu repazasi rinoti iye anowana ruzivo rwake kubva kune mamwe masevhisi anodzora mashandiro emureza wenhema.
Dammegard inofanotaura mangwana uye zuva rinotevera mangwana 39 inorwisa mumaguta mashanu ataurwa. Iko kushanda kwenhema mureza (iyo yakaziviswa seyekutyisa chiitiko) ingadai yakapihwa zita. Zvaizobata mashandiro e "Nyanza Eagle".
Pamusoro pezvo, pachave nekurovedzera kwakabatana nenjodzi panzvimbo inochengetedza masimba enuzi kuchamhembe kweSweden, iyo Dammegard zvakare vanofungidzira kuti ichave yekunyepa mureza gandanga. Zvionere wega kuti Dammegard anozvitaura sei zvakajeka munhaurirano iri pazasi segurukota reimwe midhiya. Ini handivimbe nemurume uyu, asi ndakatsanangura kuti pasi pemawebhu maviri ataurwa webhusaiti uye izvo zvinotaurwa pamusoro.
Kana iko kusiri kwekungoita kwekuvhundutsa chete, asi chaiyo (mireza mireza) kurwiswa kunotevera, ipapo iwe unogona zvakare kuwana mhedzisiro, iko kuti masevhisi acho achati nzira dzakaita seOle Dammegard nedzimwe nzira dzenhau dzine mhosva nazvo kuti masangano emagandanga anoziva nezvekurovedza muviri uye saka anoshandisa iwo maitiro echiitiko kuita kurwiswa chaiko pamazuva iwayo. Muchidimbu: ndizvo chaizvo izvo (zvinodzora) dzimwe nzira midhiya dzinopomedzerwa pane nhema pairi uye ndicho chikonzero chakanaka chekusabvisa zvachose zvese zvisiri zvemukati kubva internet. Mamwe midhiya enhau ndiye, mushure mezvose, iwo aifanira kuburitsa marudzi ese ekurovedza akarongwa mu'yakavanzika sezvinobvira 'nzira. Ipapo zvinogona kutaurwa kuti iyo mimwe midhiya yakabatsira "mapoka emagandanga" neruzivo kuti ivo zvakarurama vakakwanisa kurwisa apo munhu wese aifunga kuti yaive chiitiko.
Mapurisa nemauto vanogona (kana mune yekurwiswa kwenhema, iyo inofungidzirwa kuti ndeyechokwadi; mureza wenhema saka) vanoti chokwadi vanotsvaga nemakamera avo uye kugovera ruzivo (ona kudanwa kwaDammegard kuti ape maficha zvese), mapoka emagandanga akabatsira zvakanyanya, izvo zvaitadzisa basa ravo.
Yakanga isiri iyo hombe kutya kwekurovedzera mamiriro e911? Kunyangwe ipapo kwaive nemitambo mikuru yaizoitika kubva kuiyo airspace kuchengetedza sangano NORAD; vanogadzirisa airspace pakaitika kurwiswa kwehugandanga. Naizvozvo chirevo chakapetana kaviri zvekuti midhiya inogona kusarudzwa seyakabatana muchiitiko chekutyisa mafungu mangwana uye zuva rinotevera mangwana. Zvino iyo mimwe midhiya nenhau dzayo yekutanga nezvekutyisidzira mazoezi iri yakaitwa mubatanidzwa.
Ichave mamiriro api; (1) Ole Dammegard anova mutungamiri mutsva muChokwadi kufamba senge yekuchengetedza mambure esimba of (2) ndiye ane chikamu chekuita nekuurayiwa chaiko kwezviitiko zvehugandanga pamisi yaaifanira kuburitsa pachena, kana zvichidikanwa, inzvimbo dzekofi. Chero zvazvingaitika, zvinoramba zvichionekwa kuti kurovedzera kana chero (mureza wenhema) kurwisa kuchaitika. Izvo zvaizo, zvisinei, zvinoenderana nekutarisira kweiyo fake mureza hugandanga wave kutotaurwa pano pane saiti. Europe inogona kushandisa kickstart yemisangano mikuru yakarongwa. Zvirokwazvo panguva iyo iyo Brexit ikozvino pakupedzisira inoita kunge inopera munhaurwa. Ivo hapana chavanoda kupfuura nyonganiso; for 'Ordo ab Chao'.
Dammegard saka vanogona kuisa hwaro hwechirambidzo chaicho pane imwe webhusaiti uye pamapikicha mapurisa, mauto uye 'vashandi vekubatsira'.
Nekuti iyo nguva iripo hapana chiratidzo chekurwiswa kana kwekuvhundutsa maekisesaizi. Basa raDammegard saka raive shoma zvishoma kupfuura zvandaireva kwaari, uye ivo vakatanga maitiro akafanana neakare. Haana kuzova gamba guru, kana iye nevatsigiri vake vakave shamwari dzekubatsira magandanga nekupa mafirimu mapurisa neuto. Aiwa, akazova murume anogona kudzikisira kuvimba nekutenda kwemamwe midhiya. Ndinotizve, nekuti izvi zvakamboitika pamwe nekusunungurwa kweshamwari yake hombe 'Zen Gardner' senhengo uye mutungamiri weChita chevana vekereke yemakore; chinamato chinosimudzira bonde nevana. Ole Dammegard yakamboratidzwa kuve shill uye ikozvino inoratidza kuti zvakare. Iyi ndeimwe yemaitiro ekuchengetedza mabasa. Ivo vari kuvhura pawns yavo, iyo inokurudzirwa kwazvo kwese kwese nemamwe mawebhusaiti (ayo zvakare anozvidzora). Ipapo ivo vanopurutira zvinhu nekunyomba kukuru. Ini ndakarondedzera maitiro aya mune akawanda akapfuura zvinyorwa. Ini ndinoramba ndiri nyaya yangu.
Pfungwa iwe, vanhu vakaita saOle Dammegard ramba uchizivisa hafu yezvokwadi sekufungidzira zvirevo. Ivo vanofanirwa kunyadzisa kufunga kwakasimba nekutanga kuunganidza vazhinji vevatsigiri vozoisa zvinhu zvinonyadzisa. Zen Gardner zvakare inongochengetwa pasi pehutongi. Vanhu vakaita saWillem Felderhof (Open Mind Conference) uye Ole Dammegard vanofara kutora chikamu, asiwo masosi saElla Ster. Kugara kure neaya shangu izano rangu.
Runyorwa zuva rechinyorwa chepakutanga: 22 Gumiguru 2019 16: 47
Mushandirapamwe weRed Cross 'kuona nezvengozi' nenzira yakangwara yekurambidza 'kutapa vanopwanya mapurisa'?
Strasbourg mumakethe yeKrisimasi kutya uye magandanga anopukunyuka anoita zvakanaka chaizvo nguva (gamuchira Eurogendfor)
Iyo 'inotyisa muchengeti' mantra yeAIVD
Tags: 5, Barcelona, dambudziko, venhema, Featured, mureza, nyukiliya simba, london, Manchester, NORAD, kurovedza muviri, Ole Dammegard, operation, Paris, reRotterdam, Gondo, zvingaitwa, maguta, kutya, kugandanga kwegandanga, mureza wenhema, zvishanu, Sweden
22 October 2019 pa 17: 25
"Chii chandingaite?" Saka usateedzere kuraira kweDammegard uye kunyanya dzivisa hotspots uye utenge chikafu chakabikwa uye kunwa mvura kwemavhiki mashoma.
Saka usafunge kuti iwe unogona kuwana hukuru hukuru nekupa mafirimu. Icho chiteyeso chekuziva chinorambidzwa pane izvo. Saka zano rangu: usateerere kune ino pension yemasimba Ole Dammegard.
22 October 2019 pa 18: 16
Vatsvaki vechokwadi vachakurumidza (kuvonga - pawn yevanzika masevhisi - Ole Dammegard) matsotsi matsva. Ivo vakabatsira mapoka emagandanga kuwana ruzivo nekuburitsa mazuva ekudzidzira uye nenzvimbo uye ivo vakatumira vanhu munzira kuti vatore mapurisa neuto (vachibvumira magandanga kuti apindure kwavari).
Maka mazwi angu!
22 October 2019 pa 18: 02
Grapperhaus haigoni kumirira ...
22 October 2019 pa 18: 42
Ini ndinonzwa pano "vava Inofizielle Mitarbeiter"? Yeuchidza zvishoma yenguva yeDDR ..
Icho chiitiko kubva kuna Grappermaker zvakare chinondiyeuchidza nezvakasimba nezveimwe nguva, asi ini ndichave ndiri matanhatu uye kotara zvisizvo.
22 October 2019 pa 19: 40
nei vachiita zvinhu zviome kudaro, tipe Herr Oberst uye Ministerium wake für Staatssicherheit ruoko runobatsira ... nekuti pamwechete isu takasimba 😀
3 November 2019 pa 17: 03
Hatisi kuwedzeredza zvishoma salmon uye martin ikozvino ... Mapurisa ehurumende hahaha
22 October 2019 pa 21: 33
Tarisa iyo logo iri kurudyi kumusoro kwevhidhiyo yaOle. Nei chiratidzo chakawanda kudaro apo iwe uchizvizivisa pachako iwe unotsvaga chokwadi. Saka zvinodikanwa here kudyara kusahadzika?
22 October 2019 pa 22: 37
Precisely marcos vanhu vasingakoshese chiratidzo, ndiwo musimbiro weshoko pakutanga.
Asi nei, semuenzaniso, Ella akambomira kana kuda kuziva kuti asatepfenyure MartinVrijland firimu pawebhusaiti yavo kubva kuPegida kuratidzira hoax, asi kubva kune iro gumhi rakapfeka gwaio Olle Damnguard.
Sei zvairehwa naMartin Vrijland zvisina kumbobvira zvatorwa zvakanyanya kuOM, nei? nekuti iyi blogger HAIYO yakaongororwa, saka vanhu.
Iyo Dammgard iyo inotaura uye inorova uye haina kana asi yakambotsigira chero chinhu chakakomba nezvinhu. Zvese ndezve mireza manyepo uku 80 iri% hoax.Vanhu vakaita saOlle Dammgard kunyange vari vekunyanyisa mhirizhonga, vatengesi vari pasi pevhu (kupikisa kusimuka) kuti zviise saizvozvo, musoja aine yunifomu yedu pauri kumashure pfura.
Taura zvimwe chete nekupikiswa kwakadzorwa WantToKnow, EllaStar, Niburu.co uye akati wandei.
Iyo pawn yakafanana neIcke iyo isina kudzorwa. Kana iwe ukaita zvirevo zvinotyisa nezve CIA uye zvinopfuura zvaunofanira kutarisira kudzikama, iwe ungafunga, kwete, kwete Olle, Olle anogona kungoramba achingoenda uye uchengete achangomutswa mhombwe mhombwe, mutengesi akapotswa iwe unodana vanhu vakaita saOlle Damm Guard , Peck ine minhenga yakawanda, isingateereri
22 October 2019 pa 22: 50
Izvo hazvizogamuchirwe nevazhinji kuti mumwe munhu anoratidza pachena "zvakadzika" kutaura nezve PsyOps uye "Dambudziko, Reaction, Solution" inogona pachavo kuve pawn yesimba.
Nezvekuti iwe unofanirwa kuona kuti simba rinotonga rinoziva kuti iwe unogona chete kubata vanopikisa mubato waro kana ukagadza pawn semutungamiri anopikisa pachako.
Yakadaro-yakakandirwa kupikiswa pawn yakafanana ne chameleon inotora iyo yakafanana ruvara uye kuravira sevanhu vanonyatsofunga vakasununguka. Izvi zvinoita kuti zvindiomere, nekuti mumwe munhu saDhammegard, asi naRobert Jensen vanoedza kutevedzera chaizvo zvandinounza. Yangu chete saiti yangu inogezeswa, inocherwa kwese kwese uye encapsated. Kune rumwe rutivi, ivo vanogamuchira kutarisisa kwakazara.
Urongwa hwakanyanya uye hwakangwara.
22 October 2019 pa 22: 58
Yakanyanya kunatswa, iyo psychology yakawanda yave ichienderera kwemakumi emakore, pamwe inoshanda kune masasi, asi kwete kune wese munhu, uye iri kuwedzera uye zvakanyanya.
22 October 2019 pa 23: 39
Nenzira, xandernieuws yakakanganikwa, pepanhau re-telegraph kana kupikiswa kwakanyanya-kwakanaka senge kune zvimwe.
Zvinotaridza kuti mawebhusaiti ese aya anofanirwa kutaurirana pamwechete nhau dzeOlle Dammegard. Hazvina kunyanyo kutiomera isu tese kuti hazvina kuperera mumvura radar. Zvichida izvo zvichasvika, "iyo radar kurwisa", iwe unofanirwa kuve nhengo yeXandernieuws kana Telegraaf kana ellastar
Saka bhero rekuraisa rinofanira kuenda.
Nekuti ngatifungei Ole achange ari mugwara, ipapo anenge ari pakurangana, ngatiti haasi kurudyi izvo zvinonzi kukurudzira kana kuvhundutsa, zvakanaka zvese zvakasarudzika media, asi Ole anozoenda pasi
uye zororo rinoenderera nekuti ivo zvirokwazvo mutumwa.
Misa psychology yemhomho inomuka
22 October 2019 pa 23: 44
Zvakanaka .. De Telegraaf inotamba chikamu chikuru che PsyOp basa uye webhusaiti dzinopikiswa dzinoridza nzvimbo inoita seti yekuchengetedza.
Mambure ekuchengetedza ayo anotora ruvara rweVrijland kunge chameleon.
Iko kuongororwa kwe Facebook uye mamwe ma media enhau anozorora. Iyo inodzora imwe nzvimbo saiti inongodhonzera iyo yekuchengetedza net pawns uye kunyarara Vrijland kurufu.
Kunze ikozvino kuXander ... nekuti ikozvino kubatana neGeenstijl uye Jensen kunofanirwa kuitwa zvese nekukasira, nekuti ini ndinogara ndichifumura aya masayithi e2.
23 October 2019 pa 05: 33
Ini ndinonzwisisa uye ndinonyatsonzwisisa izvo zvaunotsanangura pamusoro. Nekudaro, izvo zvichiri kundichengeta ndakabatikana mubvunzo wekuti nei webhusaiti iyi ichishandisa chiratidzo chekuziva. Huwandu hwevanhu vanoona kuburikidza neichi chiratidzo huri kukura, saka nei iri zano. Ndeipi pfungwa yako shure kweizvi?
23 October 2019 pa 07: 14
Ndakaona zvakare kuti Martin Vrijland anotaurwa mumweya mumwechete saJensen uye hapana chimiro. Ivo vanonyatsofunga kuti munhu wese anoremekedza kuti asapfuura pazviri.
Zvinondirova zvakare kuti pakati pemhinduro dze xandernieuws, semuenzaniso, kune mhinduro dzinonzwisisa mamiriro chaiwo. Iye zvino mafuta mashoma apusa, asi zvishoma nezvishoma anokura uye akakura. Ivo vanogona kubata zvavanoda asi kwatove kunonoka.
22 October 2019 pa 22: 21
Ole angaverenga pamwe pawebhusaiti ino here? Paminiti 14: 21 iye anoti, "Izvo zvinovakirwa padambudziko rekare, Reaction, Solution." Uye zvinodzokorora izvi dzimwe nguva shoma.
Tinogona kutanga poli pano. Ndeapi mamiriro ezvinhu akataurwa naMartin anozoitika? 😉
Ini pachangu, ndinofunga mamiriro 2 anonyanya kudiwa pane script. Boka rakakura rakaiswa kunze kwekutamba mune imwechete kuenda. Reference iri kuramba ichiitwa kune mamwe ma media mune zvematongerwo enyika uye main media media. Iyo "yakanaka" nguva yekushandura iyo mimwe midhiya muhembe yake.
Asi kana zvinhu zvikasaenda sezvakarongwa, mamiriro ezvinhu 1 ndeyechokwadi chirongwa chakanaka chekusunga. Kune izvi, kurwiswa kwakafanotaurwa hakufanirwe kuitika. Kana pasina chingaitika, ipapo Ole anobva angosimudzirwa kune vese-kuziva-kugara-kwakanaka.
23 October 2019 pa 04: 21
Hakusi kuchenjera here kuita firimu zvese uye kusaburitsa izvi. Mirira kusvikira zvese zvaferefetwa zvapera uye wobva wazviisa online, kuti pamwe nyaya yepamutemo ive isina basa?
23 October 2019 pa 08: 32
Kwete, nekuti zvinofungidzira kuti nharo inoshandiswa kuti magandanga (kana paine zvingaitika) awane data hombe..or: iyo data inogona kuunganidzwa kubva kumafoni kuburikidza nemvumo yekuvanzika (mushure mekuisa Software).
Mune mamwe mazwi: mazhinji mapurogiramu anokubvumidza iwe kuti uwane yako yekuchengetera yemuno uye uone iyo data, saka maseva makuru e data anowanzove nemafoto ako nemavhidhiyo.
Kana "magandanga" anogona kuwana iyo data hombe (kubira maseva), ivo vachava nemifananidzo nemavhidhiyo.
23 October 2019 pa 05: 40
23 October 2019 pa 08: 48
Ole inorwiswa kwazvo..aldus Ole. Iri ibasa rake kugadzirisa izvozvo. Muchidimbu, vanotsvaga chokwadi vajaira kudzvinyirirwa kuburikidza neDammegard.
Zvirokwazvo vazhinji vachamhanya mushure memambure akachengeteka aya, asi zvese zvakawandisa kwandiri.
"Nzira yakanaka yekudzora vanopikisa ndeyekuzvitungamira iwe"
Senge chameleon yakanaka, Ole Dammegard zvino vachashandisawo iwo magwaro.
23 October 2019 pa 08: 49
Alfred Lambremont Webre ... imwe yakanaka inodzora kupikiswa pawn
23 October 2019 pa 08: 58
Ole inogona kufamba famba inodhura motahome uye unoona iyo yakanyanya kunaka adventures.
Basa rake: shandisa iyo kudzvinyirira (uye kunyanya 'itya' .. nekuti havasi vese ndeve gamba saOle).
23 October 2019 pa 09: 42
Hei Ole! Icho zvimwe here chinangwa chekuti iwe watoisa hwaro hwemitemo mitsva inorambidza misangano diki isina mvumo?
ellie akanyora kuti:
23 October 2019 pa 06: 05
Kufungidzira kuti ndizvo chaizvo kuti Ole ndeyakapikiswa inoshora. Anozviziva iye here? Iye chikamu chekuziva cheakadzika mamiriro kana iye pachezvake akabatwa nekunyengera?
23 October 2019 pa 08: 43
Haataridzika chaizvo semunhu akabatwa unofunga? Iwe unongofanira kutarisa nemeso.
23 October 2019 pa 10: 54
Mutambo uchatanga zvino here?
23 October 2019 pa 17: 13
Vanhu vazhinji vanofunga Ole Dammegard chinhu cheCIA asset:
23 October 2019 pa 22: 32
Huye raive zuva raityisa rinotyisa Ole!
Saka shill yawa kuburikidza nedengu
Bvisa iyo..serve.. kwete bump back!
23 October 2019 pa 22: 33
4 karoti akanyora kuti:
24 October 2019 pa 12: 17
Nhamba chete 39 mechi. (Ole)
24 October 2019 pa 16: 33
Uye muna Pauw, hongu, kutonga kwakawanda kwakakurumidza kutaurwa nezuro ..kutevera 39 miviri mumota ..
24 October 2019 pa 16: 35
39 miviri haina kufanana nekurwiswa kwe39, asi ini ndakaona nekukurumidza ..
25 October 2019 pa 19: 25
30 October 2019 pa 05: 54
30 October 2019 pa 12: 31
Hukuru! Isu takadzivirira nekuda kweOle!
Chengetai kumusoro Ole!
Kutenda Ole, NATO yaungana pamwechete nekukurumidza kupusha mureza wenhema!
Wow WauW WauWW !!! Ole ingori gamba murume!
Masasi makuru !!
"Misangano yekukurumidzira muBrussels!" Dhongi rangu
1 November 2019 pa 00: 09
Kusvika riini mucherechedzo uye / kana nzira dzeNLP zvingaende mumavhidhiyo akadaro?
Ini ndinobvunza izvozvo nekuti ini ndinoona kuti ndinokanganiswa neshafu yeOle iyo inondiyeuchidza nezveganda renyoka. Ndinocherechedzawo maonero aOle muvhidhiyo iyi. Ari padhuze-padyo uye anotarisa pasi kune vateereri.
1 November 2019 pa 00: 59
aya ndiwo maitiro asingaonekwe anoshandiswa
30 October 2019 pa 06: 09
Gadziridza pamusoro, 33.39 maminetsi pano pachiratidziro, vanhu vanonakidza.
« Iyo yakadzika 'ghost mhuri' PsyOp yekubvisa yako yese kusununguka uye kuunza 'pfungwa mapurisa' (chikamu 3)
Kuuraya kaviri kwaGina naMarinus muPatie cinema Groningen »
Total Visits: 14.059.531
Nicky Verstappen Jos Brech ari pamusoro pekugamuchira dhatabhesi reDNA rekunyepa neDNA yako online
UN manifesto '90 inoratidza: matanho emamiriro ekunze akagadzirwa kuti aite hurumende yenyika
Mindsupply op Nicky Verstappen Jos Brech ari pamusoro pekugamuchira dhatabhesi reDNA rekunyepa neDNA yako online
Martin Vrijland op Nicky Verstappen Jos Brech ari pamusoro pekugamuchira dhatabhesi reDNA rekunyepa neDNA yako online
SalmonInClick op Nicky Verstappen Jos Brech ari pamusoro pekugamuchira dhatabhesi reDNA rekunyepa neDNA yako online
Itai 1.685 vamwe vanyori